Best Portable valizy Turntables mpividy 2017-ny mpitari-dalana - China 10TURNTABLES
> Best Portable valizy Turntables mpividy 2017-ny mpitari-dalana
Valizy Turntables famaritana Comparison
Brand Name Turntable hafainganam-pandeha gazety mpanampy dreninao Headphone Jack Buttons
Crosley CR8005A-DS Cruiser 3 Speed Full Dynamic Range Stereo miteny √ √ Check Price
Crosley CR8005D-TW Cruiser Deluxe 3 Speed Full Dynamic Range Stereo miteny √ √ Check Price
Electrohome Archer vinyl Record Player Classic Turntable (EANOS300) 3 Speed Full Dynamic Range Stereo miteny √ √ Check Price
Crosley CR6019A-BR mpanatanteraka Turntable 3 Speed Full Dynamic Range Stereo miteny √ √ Check Price
1byone Belt-Drive 3-Speed ​​Portable Stereo Turntable	 3 Speed Full Dynamic Range Stereo miteny √ √ Check Price
Victrola Vintage 3-Speed ​​Bluetooth valizy Turntable 3 Speed Full Dynamic Range Stereo miteny √ √ Check Price
Jensen Portable Stereo Turntable 3 Speed Full Dynamic Range Stereo miteny √ √ Check Price
Ion Audio vinyl Motion Deluxe | Portable 3-Speed ​​Belt-Drive valizy Turntable 3 Speed Full Dynamic Range Stereo miteny √ √ Check Price
Musitrend vinyl Record Player Classic Portable valizy 3 Speed Full Dynamic Range Stereo miteny √ √ Check Price
Tyler Bluetooth kitapo vinyl Record Player Classic Turntable 3 Speed Full Dynamic Range Stereo miteny √ √ Check Price
Compact, mety sy mora vidy. Ary izao no teny izay mamaritra turntables navoakan'ny Crosley. Rehetra ny lalana avy any Etazonia, dia efa indray ny turntable amin'ny sehatra miavaka vokatra izay voasambotra ny sain'ny maro turntable mpankafy.
Naniry foana ny turntable izay tsy mitovy amin'ny hafa? Izany Crosley Cruiser turntable manokana avy amin'ny Disney zavakanto sy mahay milalao amin'ny hafainganam-pandeha izay telo samy hafa ahafahanao mihaino karazana rakitsoratra rehetra. Tsy izany lehibe? Izany turntable dia tonga noho ny headphone fihainoana Jack ho an'ny tsy miankina. Raha ny marina, ny seranan-tsambo dia nametraka auxillary any an-turntable, mahatonga mihaino mozika tsara na dia rehefa afaka mampiasa ny finday mba hifidy hira araka ny safidiny.
Izany dia midika hoe natao ho toy ny azo entina araka izay azo atao. Amin'ny Funky safidy ny loko, dia mifono mena teo ivelany, ary mavo ny ao anatiny. Koa, ny turntable tonga miaraka mavitrika isan-karazany manontolo Stereo mpandahateny izay afaka mba hambabo ny sainao sy ny fanahinao. Io no priced turntable amin'ny $ 104,95.
Mpilalao lehibe ho an'ny beginners.
Ny fanomezana tanteraka ho an'ny namana na fianakaviana.
Ny boky kely Output dia ambany.
Modely iray hafa avy any Crosley, raki-peo ity orinasa efa voaporofo ny fotoana sy ny fotoana indray fa izy ireo dia afaka manao turntables mamirapiratra. Raha toa ianao mitady turntable izany bebe kokoa ho any amin'ny lafiny mahazatra, izao no nanome modely ho anareo. Mifono in Brown, izany modely natao mba hanome avy eny ambony Vintage fijery.
Io modely ny Crosley ny turntables tonga miaraka amin'ny NP6 fanjaitra. Trial ka naka fanahy, izany fanjaitra dia tsy ratsy raha tadiavinao ny teny ambaratonga turntable. Miaraka amin'izany turntable ianao dia afaka mampifandray ny findainao amin'ny alalan'ny Bluetooth. Izany miantoka ianao fa ho afaka ny hihaino ny toerana tena hira ho mety araka izay azo atao. Ary ny turntable dia tonga noho ny headphone Jack izay mamela anao hihaino ny feon'ny favoris mitokana. Izany turntable dia manana ny fahafahana hanitsy ny RPM misy firaketana an-tsoratra sy Tafiditra amin'ny mavitrika Stereo mpiteny izay delievers ny tsara indrindra ho an'ny fampisehoana peo anatrehanareo.
Na dia ny boky kely Output mety ho ambany, ny matihanina rehetra fa izany vokatra tena mahafaka ny azy. Toa mahavariana sy tsy misalasala mahagaga mpilalao. Io modely io priced amin'ny $ 74,48, ary dia tena tsy mampino hoe mpiady varotra tsy noho ny habetsaky ny endri-javatra dia manana.
Volume Output Mety ho kely loatra ambany.
Mahavita: Black Textured PVC
FANORENANA KEVITRA: MDF Cabinet (mpanelanelana amin'ny tontolo hakitroky fiberboard)
FIRAKETANA AN-TSORATRA PLAYER: Eny
FIRAKETANA AN-TSORATRA hafainganam-pandeha: 33, 45, 78
FIRAKETANA AN-TSORATRA AUTO FIVERENANA ARM fanitsiana: NA
45 adaptatera ahitana: Eny
AUTO hiverina; Eny
USB PLAYBACK: Eny
USB fa mamaly ny: No
USB peo: No
HEADPHONE Jack: Eny
MPANAMPY INPUT: Eny
MPANDAHATENY SIZE: 2 x 3 "5W 8Ohm
HERY EPS: External
HERY adaptatera INPUT: 120V - 240V (50/60 Hz)
HERY fihinanana: 19 Watts
Matetika isan-karazany (AM): NA
Matetika isan-karazany (FM): NA
INONA no ahitana: Archer valizy Turntable , 45 Record adaptatera, AC adaptatera, Instruction Manual, 1 Taona Warranty, miavaka Customer Support
Electrohome no mpanamboatra ny mpitarika ny mpanjifa vokatra elektronika nandritra ny 100 taona. Ny mpanjifa no faharoa ny tsy misy toy ny androm-piainany izy ireo mpanjifa fanohanana. Izany 3-in-1 valizy turntable dia manana endrika lehibe, ary koa ny fomba lehibe manome anao hilamin-tsaina noho ny fomba azo entina izany.
This turntable is inspired from the 1960’s. The Electrohome Archer Vinyl Record Player Classic Turntable dia afaka hilalao vinyl firaketana sy ny tena ny mozika avy amin'ny tena manokana moblie fitaovana. -Tsy izany, ny headphone Jack dia omena ho an'ny tsy miankina fihainoana. Izany turntable dia mitoetra miaraka amin'ny hazo rehetra governemanta izay mamela ny naorina fitenenana mba hahatratra ny fahafenoany mety ny nanolotra ny tsara indrindra peo fampisehoana mba hikasika ny fonao. Raha ny marina, izany dia tonga noho ny safira tipped tanimanga fanjaitra izay manome naneho fitiavana kokoa Vibe voajanahary.
Mifono mainty, izany dia endrika kanto ary manana fijery fa Vintage Retro. Izany dia midika hoe Vita mainty PVC ary manana plastika dovia. Izany turntable voafehin'ny mba haharitra mandritra ny fotoana ela be. Toy ny ankamaroan'ny turntables, ny ankamaroan'ny vinyls dia azo nilalao hampandeha tsara. Io modely io priced amin'ny $ 49,91 ary lehibe mangalatra.
Large sarony mba afaka hanidy rehefa milalao.
Mpiteny teo amin'ny lafiny roa fa tsy aloha. Izao no fanomezana tsara kokoa hatanjaka amin'ny multidirections.
Seranan-tsambo manana tahirin-kevitra sy ny bokotra eo anoloany.
Skips kely raha ny amin'ny vaovao vinyl.
04 • Crosley CR6019A-BR mpanatanteraka Turntable
Modely miavaka iray hafa avy Crosley, izany dia valizy turntable tsy tahaka hafa. Ny Crosley CR6019A-BR mpanatanteraka dia afaka hilalao amin'ny hafainganam-pandeha telo samy hafa. Izany dia ahitana ny auxillary tariby izay mamela anao milalao ny toerana tena hira ny finday na ny fitaovana sy ny USB seranan-tsambo ho an'ny Windows na Mac nanohana ny solosaina.
Ny valizy dia mifono varahina nopetahany takela fitaovana. Mifono in volontany, dia tena manome eny tena Vintage Vibe. Raha ny marina, dia avy amin'ny mavitrika isan-karazany manontolo Stereo mpiteny ny toetra miavaka. Ny fihetseham-po sandry izay nametraka ao an-turntable dia tsindrio nahaleo na tanana na dia voafehy, ny firaketana an-tsoratra dia tonga dia hitsahatra, raha efa vita ny lalany.
Priced amin'ny ihany $ 81,52, modely io dia mendrika dolara isaky ny lany. Izany ny fanomezana tonga lafatra ho an'ny namanao na ny fianakavianao. Mety, mora ampiasaina sy tena mpampiasa namana, modely io dia tena iray amin'ireo safidy ambony.
Afaka mba hanoratra hira ho MP3 rakitra USB alalan'ny asa.
Lehibe beginners mpilalao na inona na inona.
Volume Output dia kely ambany loatra.
Tsy afaka milalao firaketana an-tsoratra ao amin'ny hafainganam-pandeha telo samy hafa. Koa, izany dia natao ho toy ny kitapo nahaleo turntable Pu nofonosina amin'ny hoditra amin'ny hazo governemanta. Kanto nefa tsotsotra, modely io no zava-dehibe izay hafetsen'ny maso. Small andcompact, ianao afaka mitahiry izany na aiza na aiza, ary amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny ankapobeny, manome izany ho tsara tarehy nefa mahagaga endrika mba hisambotra ny tsara.
Zavatra tsy turntable mavitrika ahitana sandry voalanjalanja feo malefaka damping amin'ny rafitra. Izany dia ahitana ihany koa turntable miatrika mpiteny aloha ho nihatsara toetra feo. Raha ny marina, dia omena miaraka amin'ny headphone Jack izay mamela anao manokana mihaino koa. Althought izany skips kely raha ny vaovao vinyls, ny habetsaky ny matihanina modely io no mahafaka ny azy. Io modely io priced amin'ny $ 59,99.
Toa mahagaga ary mora nanangana sy nilalao.
Madinika sy voalamina tsara.
Skips kely raha ny amin'ny vaovao vinyls.
06 • Victrola Vintage 3-Speed Bluetooth valizy Turntable
Mamirapiratra, manaitra sy eyecatching. Ny Victrola Vintage 3-Speed Bluetooth valizy Turntable dia manana endri-javatra isan-karazany lehibe raha ny amin'ny mozika. Izany turntable Mirakitra naorina mpiteny izay azo ampiasaina na amin'ny vinyls, auxillary telegrama sy amin'ny alalan'ny Bluetooth asany.
Rehetra mba cater ny tsy hanahirana. Ny Bluetooth asa lehibe rehefa tsy manana vinyls na telegrama auxillary ankehitriny. Rehefa ianao tànany samirery mpitovo afaka milalao mozika tianao na avy aminareo fitaovana. Izany dia tonga noho ny headphone mihaino Jack ho an'ny tsy miankina ihany koa.
Modely avy any Victrola dia natao hijery araka Retro araka izay azo atao. Tena tsara tarehy, ary manome mahagaga eny ny nostalgic Vibe ny amerikanina Fisakafoanana hariva. Eritrereto ange ny zavatra ny endrika sy ny vidin-modely io, dia tokony iray amin'ireo safidy ambony ianao, raha mitady turntable. Io modely io priced amin'ny $ 57,15.
Perfect stowaway mpiara-mitory ary ny tena azo entina.
Firaketana an-tsoratra lehibe mpilalao sy ny mpandahateny noho izany vidiny.
Hafainganam-pandeha tsy mifanaraka.
Tsotra ao amin'ny ny tsara indrindra, ny Jensen Portable Stereo Turntable dia fehikibo entin'ny turntable izay mahay milalao amin'ny hafainganam-pandeha telo samy hafa izay mamela vinyls indrindra ho nilalao hampandeha tsara. Natao mainty, dia tena manana ny taloha Vibe Retro valizy ary tena tsara tarehy.
Inona no mahatonga izany modely misongadina dia fa manana rafitra izay mahatonga ny feo sandry mba hiverina ho azy io tany am-boalohany toerana rehefa vita ny vinyl efa milalao ny lalany. Amazing sa tsy izany? Afa-tsy, izany turntable tonga miaraka amin'ny vaovao rehetra sahy Software for mety fandraisam-peo sy ny fanitsiana ny feo. Noho izany, ianao dia tsy mila mividy misy fanampiny rindrambaiko mba manova ny teny.
Mikapoka vorona roa amin'ny vato iray. Izany koa dia tonga miaraka amin'ny auxillary seranan-tsambo izay azo mifandray amin'ny alalan'ny findainao ary manana RCA seranan-tsambo ho an'ny fanampiny miteny. Tsy manahy toy ny 120V AC adaptatera dia raisina tsara ho an'ny feo tandrify perfomance. Additionaly, dia sarony lehibe azo mikatona raha mbola milalao vovoka mba tsy ho avy eo. Ary nidina ho any amin'ny tsara indrindra, ny vidiny. Io modely io priced amin'ny $ 94,95.
Mpiteny teo amin'ny lafiny roa mba hanome tsara kokoa multi-directional feo.
08 • Ion Audio vinyl Motion Deluxe | Portable 3-Speed ​​Belt-Drive valizy Turntable
Kanefa modely hafa amin'ny Ion, dia naorina miaraka amin'ny kilasy sy ny kalitao. Ny Ion Audio vinyl Motion Deluxe dia portable 3-Speed ​​Belt-Drive valizy Turntable izay naorina mpiteny ny feo tsara indrindra toetra. Midika izany fa tsy tokony hahazo na fanampiny mpandahateny mba hanangana ny turntable. Moa ve tsy mahafinaritra izany?
Ny iray amin'ireo tsara indrindra turntable faritra ity dia ny bateria dia rechargable mba hahazoana antoka ora ny fifaliana. Manana ny auxillary roa seranan-tsambo sy ny headphone Jack milalao mozika avy amin'ny tena manokana moblie fitaovana sy ny tsy miankina listeningrespectively.
Ity turntable dia modely ho an'ny lehibe na iza na iza no mitady ny hahazo ny teny anivon'ny mpilalao. Ny tena mety, ary azo mora tehirizina. Izany no no zava-dehibe indrindra momba ny portable valizy mpilalao tsy izany? Io modely io priced amin'ny $ 37,67 ary tokony hahazo ny tanana iray amin'izao fotoana izao.
Lehibe ambaratonga fototra teny mpilalao.
Mety sady tsara raha maro ny toe-javatra.
Small portable turntable miaraka amin'ny bateria anatiny ary nanorina dovia amin'ny fitenenana.
09 • Musitrend vinylRecord Player Classic Portable valizy
Ny iray amin'ireo hevi-dehibe ao amin'ny Musitrend vinyl Record Player Classic Portable valizy dia fa maivana, milanja 5.8 lbs ihany. Izany dia natao toy ny valizy izay tonga miaraka amin'ny tahony mora ho an'ny mety mitondra izany. Tena mahavariana ny fomba Musitrend dia afaka manao izany modely izany fahazavana.
Ity turntable dia mampino izany zavatra maro sy mpampiasa sariaka satria avy tamin'ny auxillary seranan-tsambo ho an'ny finday fitaovana, ny headphone Jack ho an'ny tsy miankina fihainoana, ary ny RCA Output fanampiny miteny. Ny endri-javatra rehetra fa ilainareo izany rehetra izany feno ho modely. Raha mbola nandinika ianao, jereo intsony.
Ny teny tsara no tena mahagaga noho ny zava-misy fa dia namboarina tamin'ny hazo ary izany dia mifono amin'ny hoditra ho tsara tarehy kokoa ny fijery. Amin'ny kely mikasika ny mena ao anatiny, dia azo antoka fa mijery miavaka. Tsy hanadino fa afaka ny hilalao amin'ny 3 samy hafa ny hafainganam-pandehan'ny ho lehibe kokoa vinyls isan-karazany. Io modely io priced ara-drariny amin'ny $ 59,99.
Tonga amin'ny USB mba hahafahanao mamorona MP3 antontan-taratasy eo amin'ny solosaina.
Speed ​​Mety moramora rehefa avy nandritra ny ora maro ny milalao.
10 • Tyler Bluetooth kitapo vinyl Record Player Classic Turntable
Raha te misy turntable izay toa lehibe sy toa lehibe, izao no nanome modely ho anareo. Ny Tyler Bluetooth kitapo vinyl Record Player Classic Turntable dia afaka hilalao vinyl firaketana an-tsoratra sy ny fitaovana finday amin'ny alalan'ny USB nametraka seranan-tsambo. Raha ny marina dia manana auxillary fahan'ny izay mamela safidy hafa noho ny milalao amin'ny finday fitaovana.
Izany dia ahitana ihany koa turntable ny headphone Jack izay mamela ny fihainoana manokana. Io endri-javatra io dia tena handray soa izay tia ny sasany ny fotoana mangina irery sy fizaram-paritry nivoaka avy amin'izao tontolo izao. Izany ihany koa dia ahitana ny RCA Output na inona na inona tianareo additonal mpandahateny. Mety milalao amin'ny telo samy hafa ihany koa ny hafainganam-pandehan'ny izay mamela vinyls indrindra ho nilalao.
Natao mainty teo ivelany, ary mavo ny ao anatiny, izany no manome tena kanto eny Vibe ho azy. Ankoatra izany, manao raharaha ihany tarehiny. Io modely fotsiny no tsy mijery tsara, fa toa tsara koa. Na dia mety ho kely wobbles amin'ny lampihazo, dia vita amin'ny naorina-in mpiteny sy mitoetra amin'ny hazo kabinetra ny tandrify peo perfomance. Noho izany modely izany dia saika faharoa ny tsy. Io modely io priced amin'ny $ 89,95.
Fanomezana lehibe ho an'ny namana sy ny fianakaviana.
Little wobbles teo amin'ny lampihazo.